Qala ngokubanzi Intatheli ye-Darknet Amapolisa aseNyakatho yaseKorea (iNgxenye 3)
Ukuxhamla kwi-Darknet kubalulekile kubalawuli bezolawulo
IMyanmar yayisakuba ngumlimi omkhulu weChristal Meth.
Ngoku ukuba izigwebo ziyancipha ngokukhawuleza izixhobo zamandla aseNyakatho Korea, abantu baseMntla Korea bangenisa iziyobisi eYurophu ngeChina. Umkhondo wefakeko "SUPERDOLLAR"Emva kokukhokelwa ngaphaya kwe-Darknet kwintlambo yasePyongyang.
Bekungayi Pyongyang kuphela iqhinga Drug ikopi yeTaliban. Ulwazi oluvela kwiiveki ezimbalwa zokugqibela linyuka ukuba iPyongyang isele yangena kwi shishini. Mhlawumbi kunjalo Ukubandakanyeka kwe-Cryptocurrency yamaNorth Korea kwakhona ukubona kule mongo. Mayelana ne-30% yabemi baseNyakatho yaseKorea bathatha amphetamines. Kwi-2010, amagosa aseTshayina athatha, ngokutsho ngolwazi lwabo, iziyobisi ezisuka kwiNorth Korea kwimali ye-60 yezigidi ze-US. Ezi zibalo zokugqibela ezithembekileyo.
I-Darknet Market Eastern Eastern (ngelishwa kukho izixhumanisi kuphela ze-Darknet), nangona kunjalo, kubangelwa nguRhulumente waseNyakatho Korea. Ukongezelela, kulula kubaduni bePyongyang ukusekwa kwindawo yokuthengisa apho bafumana abarhwebi behlabathi lonke bekhomishini. Kakade i-2013 ihlinzekwe ngabakwa-North Korea abahlaseli baseNyakatho yeMakethe thepiratebay.org zabo iinkonzo ngokusasaza iqonga "iNkokeli Enkulu". Kwakhona, i-Hidden i-Wiki Korea, i-portal ejongene noononopopasho lwezingane, sele ithatyathwe ngu-Anonymus, indawo apho abantu baseKorea baseNorth baqokele imali kwi-regime-sick illness. Ukungenelela kwamapulatifomu ngabanye kwi-Darknet kwakhokelela iNorth Korea yeMntla ukuzimisela njengomlingani wezorhwebo we-digital underworld.
Akukho mntu kufuneka ahlekise kwinkonzo yamfihlo yaseNyakatho yeKorea. Ukuba ubheka ubugebengu bobukhosi baseNyakatho Korea, wonke umntu uyahleka.
Kuphela nje umcimbi ngaphambi kokuba iNorth Korea yaseNorth Korea ibone oko kwenzekayo. Oko kuya kwenza uKim angenakuvuswa, ukholelwa.
Ukuthintela oku bekuza kwenziwa kuphela nge-diplomacy ukuba iTump ayikwazi okanye ayikwazi ukubonisa.
Vula incwadi kuKim Jong-un
Ukubulawa kuka-Otto Warmbier
I-Darknet Market East Eastern
I-Hidden Wiki Korea
Inqaku langaphambiliAmapolisa aseNyakatho yaseKorea (iNgxenye 2)
Inqaku elilandelayoI-glyphosate ijabulisa iyaqhubeka